ईश्वर तपाईंलाई चिन्नु र बुझ्नुहुन्छ (भजन १३९:१)
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको इसोको ईवी उङ्गाबेरे उन्डुबेली उम्बुन्डु एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओसेसियन काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कुइचुआ (इम्बाबुरा) कोंगो कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ (युनानिज) चिनियाँ (साङ्घाइनिज) चिनियाँ (सिचुवानिज) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जान्डे जापटेक (इस्मस) जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टुभालुअन डच डाँग्मे डेनिश तोतोनक त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) नेपाली न्यानेका पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मझतेक (हुआट्ला) माम माया मालागासी माल्टिज मिजो मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा वायुनाइकी शिलुबा शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) साङ्गो सामोअन सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिलिगेनोन
ईश्वर तपाईंलाई बुझ्नुहुन्छ
“हे परमप्रभु, तपाईंले मलाई जाँचेर चिन्नुभएको छ।”—भजन १३९:१.
“मेरो रचना नभई तपाईंका आँखाले मलाई देखेका थिए।”—भजन १३९:१६
कोही-कोही किन शङ्का गर्छन्‌? हामी ईश्वरको नजरमा पापी र अशुद्ध छौं अनि उहाँको कृपा पाउन योग्य छैनौं भनी थुप्रै मानिस सोच्ने गर्छन्‌। अमेरिकामा बस्ने केन्द्र नाम गरेकी एक स्त्रीलाई लिनुहोस्। तिनी डिप्रेसनको सिकार भइन्‌ किनभने ईश्वरले चाहनुभए अनुसार आफूले गर्न नसकेको जस्तो तिनलाई लाग्थ्यो। तिनले आफूलाई असाध्यै दोषी महसुस गरिन्‌। परिणाम? तिनी भन्छिन्‌, “मैले प्रार्थना गर्नै छोडिदिएँ।”
ईश्वरको वचन के भन्छ? यहोवा हाम्रा त्रुटिहरू मात्र हेर्नुहुन्न। बरु उहाँ हाम्रो मन हेर्नुहुन्छ र हामी वास्तवमा कस्ता व्यक्ति हौं, बुझ्नुहुन्छ। बाइबल यसो भन्छ: “उहाँले हाम्रो बनोट जान्नुहुन्छ। मानिसहरू माटोनै हुन्‌ भनी उहाँ सम्झनुहुन्छ।” साथै उहाँ हामीसित ‘हाम्रा पापअनुसारको व्यवहार गर्नुहुन्न’ बरु हामीले पश्‍चात्ताप गर्दा दयालु भई हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ।—भजन १०३:१०, १४.
यस पत्रिकाको पहिलो लेखमा उल्लेख गरिएका इस्राएलका राजा दाऊदको उदाहरण विचार गरौं। तिनले ईश्वरलाई प्रार्थनामा यसो भने: ‘मेरो रचना नभई तपाईंका आँखाले मलाई देखेका थिए, मेरा सबै अङ्ग जो दिनदिन बनिंदै आएका थिए, तपाईंका पुस्तकमा ती लेखिएका थिए। हे ईश्वर, मलाई जाँच्नुहोस्, र मेरो हृदय बुझ्नुहोस्।’ (भजन १३९:१६, २३) दाऊदले आफ्नो जीवनमा केही गम्भीर पाप समेत गरेका थिए। तैपनि पश्‍चात्ताप गरेमा यहोवाले तिनको हृदयको अवस्था बुझ्नुहुनेछ भन्ने कुरामा दाऊद विश्वस्त थिए।
अरू कुनै व्यक्तिले भन्दा यहोवाले हामीलाई सबैभन्दा राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। बाइबल यसो भन्छ: “मानिसले रूप हेरीकन विचार गर्छ तर परमप्रभुले हृदय हेरीकन विचार गर्छन्‌।” (१ शमूएल १६:७) हामीबाट भएका गल्तीहरूका पछाडि कस्ता कारणहरू लुकेका छन्‌, ईश्वरले बुझ्नुहुन्छ। वंशानुगत गुण, हामी हुर्किएको वातावरण, हाम्रो अहिलेको परिस्थिति र हाम्रो व्यक्तित्वजस्ता कुराहरूले हामीले गर्ने व्यवहारमा असर गर्छ भनी ईश्वर राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। गल्ती गरे तापनि असल व्यक्ति बन्न हामीले गरेको प्रयासलाई उहाँले याद गर्नुहुन्छ र त्यसको कदर गर्नुहुन्छ।
ईश्वर हामीलाई राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। अनि उहाँ आफूले बुझेको कुरा हामीलाई सान्त्वना दिन पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ। कसरी?
शेयर गर्ने शेयर गर्ने ईश्वर तपाईंलाई बुझ्नुहुन्छ
Text प्रकाशन डाउनलोडका विकल्प प्रहरीधरहरा के ईश्वर तपाईंको ख्याल राख्नुहुन्छ?
शेयर गर्ने शेयर गर्ने प्रहरीधरहरा के ईश्वर तपाईंको ख्याल राख्नुहुन्छ?
के ईश्वर तपाईंको ख्याल राख्नुहुन्छ?
प्रहरीधरहरा के ईश्वर तपाईंको ख्याल राख्नुहुन्छ?